Yan Naing on Sat Nov 27, 2010 1:42 pm
( 1 ) Spammer will ban immediately when Moderator will confirm the Report to Admin as he'saSpam poster.The action for that member will ban from this forum forever either his IP.
(2) Fighting on the forum will warn by Moderators for first time.On the second time , that member will be ban for5days from the forum .If he'll do again than he'll be ban for 15 days .
(3) The member who brake the rules of forum will be ban for 1 month like posting abuse , sexual , etc ....
Hope everybody will stay happy & peace in the forum .
Spammer များအားလုံးကို Moderator မှ Spam အဖြစ်အတည်ပြုပါက Admin မှ ၄င်း member အား ချက်ချင်း အရေးယူပါမည်။ ၄င်း နှင့် ၄င်း၏ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းကိုပါ အစဉ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံရပါမည်။
Member အချင်းချင်း အငြင်းပွား ၊ ရန်ဖြစ်ခြင်း များကို Moderators များမှ ပထမအကြိမ် အနေဖြင့် သတိပေးမည် ဖြစ်ပြီး ၊ ဒုတိယ အကြိမ် ၄င်း Member များမှ ဆက်လက် အငြင်းပွား ၊ ရန်ဖြစ်ခြင်း များပြုလုပ်သည်ကို တွေရှိုရပါက ၄င်း Member များကို ( ၅ ) ရက်တိတိ ဖိုရမ်သို့ ၀င်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ နောက်တစ်ကြိမ် တွင်မူ ( ၁၅ ) ရက်တိတိ ပိတ်ပင်ခံရပါမည်။
N-STAR Sat Forum ၏ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သော member များအား ဖိုရမ်မှ ( ၁ ) လ တိတိ ပိတ်ပင်ခံရပါမည်။
အားလုံး N-STAR Sat Forum တွင် ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲကူညီကြမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။